မေးခွန်း FSX မိုးလေဝသ
1 months ago9တစ်နှစ် #854 by Dariussssss
တချို့အကြောင်းပြချက်, ငါ့အပေါ်တိုက်ရိုက်ရာသီဥတုအင်္ဂါရပ်များအတွက် FSX ဆိုးဆိုးရွားရွားမှား၏။ မှားယွင်းနေပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာအနီးလက်တွေ့ကျကျ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မှန်ကန်သောအချို့သောလေဆိပ်အဘို့မဖြောင့်။ အခုဥရောပမှာလေဆိပ်အများစုမိုးသည်းထန်စွာနှင်းကြောင့်နှောင့်နှေးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
exmple အဘို့, EHAM Amsterdam..in ကိုမှန်ကန်ရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်:
မြောက်ကိုရီးယားအနေဖြင့်လေတိုက် 16 KT
အပူချိန် 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဖိအား 972 HPA
မြင်နိုင်စွမ်း: 4000 မီတာ
In FSX, လမ်းကွဲပြားခြားနားသော။ ကြည်လင်သောမိုးကောင်းကင်, ကွဲပြားခြားနားသောလေတိုက်ခြင်းနှင့်ပူနွေး .... ဘာငရဲ? ပတ်လည်ဆိုလမ်းရှိပါသလား?
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: luc57
1 months ago7တစ်နှစ် - 1 months ago7တစ်နှစ် #941 by DRCW
ဒဘောငျဗားရှင်းများအတွက်မိုးလေဝသအင်ဂျင်ကို FSX သင်တိုက်ရိုက်ရာသီဥတုပေးသူကို JESPEN ကထောက်ခံသည်မဟုတ်။ ငါ Dovetail ပေးရေနွေးငွေ့ Edition ကိုသူတို့နှင့်အတူစာချုပ်ရှိသည်နေဆဲမယူဆလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု Dovetail အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ရုံအခုအချိန်မှာတူသော FSW သေးတစ်ခုတက်ကြွရာသီဥတုအင်ဂျင်သို့မဟုတ်သင်အနေဖြင့်တဦးတည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲရေးသူမရှိပါ။ အဘို့ကိုမှန်ကန်ကမ္ဘာကြီးရာသီဥတုရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း FSX ထုတ်ဝေဘောငျ, Active ကိုက Sky 2016 တူသောသူတဦးကိုဝယ်ယူရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်: 1 တစ်နှစ်7months ago နေဖြင့် DRCW.
1 months ago6တစ်နှစ် #1013 by goffers
ကျွန်မအခမဲ့ရာသီဥတုအစီအစဉ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ - ကသေးငယ်တဲ့င်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရာသီဥတုထိုး FSX - FSXWX ။
သငျသညျကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဆိုပါ run FSXWX အစီအစဉ်ကိုသင်၌နေသည့်အခါ FSX.
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: DRCW
1 months ago6တစ်နှစ် #1014 by Dariussssss
အဆိုပါ site ကိုဘာသာပြန်ချက်, သေလွန်သောသူတို့သည် link ကိုအတွက် ..... ရောက်ရှိမရနိုင်ပါ။
1 months ago4တစ်နှစ် #1063 by goffers
Dariussssss မင်္ဂလာပါ။ မပေးသငျသညျအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသေချာ။ Link ကိုအခုအချိန်မှာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။
ဒီတစ်ခါလည်းဒီတစ်ခု, (အမှန်တကယ်ကို download တွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ) .... www.plane-pics.de/fsxwx / instructions-fsx.htm
1 months ago4တစ်နှစ် #1064 by Welsheagle
အဲဒီ link ကိုငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်ကျွန်မအကြံပေးလို www.fsrealwx.net/
ငါအသုံးပြုရန်နှင့်က .. သင်တို့ရှိသမျှအချိန်ကိုအစစ်အမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေပေးသည်။
သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုသုံးပါသို့မဟုတ်လိုလားသူမှ upgrade နိုင်ဘူး။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: goffers
0.559 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်